Mareykanka oo 20 Sano kadib cunaqabateyntii ka qaaday Dalka Suudaan (Akhri Sababta) | Baled Weyn Media Center
Maraykanka ayaa cunaqabatayntii dhanka dhaqaalaha ka saarneyd waqti dheeraa ka qaaday dowladda Sudan.
Habeenimadii Jimcaha, sarkaal sare oo Mareykan ah ayaa Wariyayaasha ugu sheegay Magaaladda Washington in Mareykanku go’aansaday in uu si rasmi ah u bur buriiyo cunaqabatayntii dhaqaale ee ku wajahneyd Sudan.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa sidoo kale soo saartay hadal horudhac ah maalintaasi, iyada oo ka hadashay dadaalka Sudan ee ah in ay wax ka qabato arrimaha argagixisada iyo sidoo kale xad-gudubyada xuquuqda aadanaha oo sabab looga dhigayo go’aankaas.
Go’aanka lagu soo afjarayo tallaabooyinka ciqaabta ee lagu soo rogay Sudan sanadkii 1997 ayaa timid kaddib markii maamulka Trump ay bishii hore ka saareen liiska wadamada ay muwaadiniintu ku xiran yihiin xayiraadaha safarka.
Hase yeeshee, tallaabadaas ayaa ka dhigaysa cunaqabatayn kale, oo ay ku jiraan kuwa ka soo horjeeda dadka la xir xiray ee ku lug leh tacadiyada lagu gaystey colaadaha ka jirta Gobolka koonfurta Darfur ee dalka Sudaan.
Isagoo ka jawaabayo go’aanka Mareykanka Wasiirka Arrimaha dibadda Sudan ayaa waxa uu yiri “Xukuumadda Sudaan iyo dadka Reer Sudan waxa ay soo dhaweynayaan go’aankaan uu Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump cunaqabatayntii dhaqaalaha si buuxda uga qaaday Sudan.”